(Mt 21,1-11 Taona A/
Lk 19, 28-40 Taona D).
Isan-taona isika dia mankalaza, na ny marimarina kokoa mamerina ny fihobiana nataon’ireo mponin’i Jerosalema an’i Jesoa niakatra tao Jerosalema, henemana mialoha ny Paka (Mt 21,1-11 Taona A/ Mk 11, 1-10 na Jn 12,12-16 Taona B/ Lk 19, 28-40 Taona D). Mialoha ny Vavaka Fanamasinana anefa isika dia miventy io antsa nataon’ny Zanak’Israely io : “Hozàna! Hosoavina anie Ilay avy, amin’ny Anaran’ny Tompo; Hosoavina anie ny fanjakan’i Davida raintsika, izay efa tonga izao; hozana any amin’ny avo indrindra” (Mk 11,10).
Tany Jerosalema dia nankalazaina ny fidiran’i Jesoa ho any Jerosalema notantarain’ny Evanjely (Lk 19, 28-40) ka nanao prôsesiô ny vahoaka avy eo amin’ny Tendrombohitra Oliva miakatra mankany an-tanàna dia avy eo mankany amin’ny Fasana nandevenana fa koa nitsanganan’i Jesoa ho velona. Tany Roma kosa dia nankalaza ny fijaliana niaretan’i Jesoa ho antsika noho ny fanekeny ny sitrapon’ny Ray (Passio). Ireo fety roa ireo no ankalazaintsika miaraka anio.
Tsy fahatsiarovana fotsiny ny fidirana ao Jerosalema anefa no atao fa mampahatsiaro antsika koa fa mpivahiny isika mizotra any ami’ilay Jerosaleman’ny Lanitra, manaraka an’Ilay Zanak’Ondry, manaiky hijaly sy ho faty, raha izany no takian’ny Fitiavana amintsika (Apok 21, 2-4). Mena ny akanjon’ny Mpisorona, manambara ny maha-vavolombelon’ny fitiavana azy ka mandresy miaraka amin’i Kristy. Hafaliana àry araka izany no ankalazaintsika fa tsy alahelo. Faly satria nandresy i Kristy ary manavao ny finoantsika fa tsy misy lalan-kafa hahazoana famonjena sy fahasambarana raha tsy ny lalan’ny hazofijaliana.
Dia ilay Zanak’i Davida (Matio), Mpanjaka avy amin’ny anaran’ny Tompo, Mpanjaka araka ny sitraky ny fony, andrandraina hitondra Fiadanana sy Famonjena izany no hobian’ireo vahoaka betsaka nanaraka an’i Jesoa niakatra avy any Jerikao (Mt 20, 29) sy ny Mponin’i Jerosalema tonga nitsena Azy, na dia ireo vahoaka ireo ihany aza, voasesiky ny hevi-dratsin’ireo Lohandohan’ny Mpisorona, noho ny fialonana (Mk 15, 10) no niorakoraka afaka henemana hanameloka azy ho faty manao hoe: “Fantsiho amin’ny Hazofijaliana Izy” (Mk 15,13). Midika izany fa raha tsy matotra ny finoantsika an’ilay Andriamanitra, ilay hany afaka hamonjy antsika, dia hivily ho azy any amin’ny zava-mandalo (fahefan’olombelona, harena, voninahitry ny tany) no hametrahantsika ny fitokisantsika. Mila dinihina matetika izay “nametrahantsika ny fitokisantsika : i Kristy ilay tsy mivadika mandrakizay” (2Tim 1, 12).
Anio koa, andro voatokana ho an’ny tanora. Antsoina handray ny Herin’ny Fanahy isika ka ho tonga vavolombelona hanambara an’i Kristy (Hafatry ny Papa Benoit XVI ho an’ny Tanora 2008).
Mirary Herinandro Masina ho anao. Tsy ho sanatria anie ho herinandron’ny fivadihana, tahaka ireo tany Jerosalema fahiny fa Herinandro handalinana lalina tokoa ny fototry ny finoantsika.